ढल्यो अरुणको घर : खै कहाँ छ घर बनाउने गुरुङ बोर्ड? - खबरम्यागजिन
ढल्यो अरुणको घर : खै कहाँ छ घर बनाउने गुरुङ बोर्ड?
April 21, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
सजन शर्मा, सुके-पोख्रेबुङ, 21 अप्रेल
पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत तीनको मगरजोङ चियाबारी माथिल्लो विभाग कोठी गाउँ निवासी अरूण गुरूङको सोचनीय अवस्थाको घर अन्तत: एकाएक ढल्यो । शुक्रवार मध्य राती लगभग एक बजी सबै सुतिरहेको समयमा घर ढलेको अरूण स्वंयले बताएका छन् । तथापि परिवारका सबै सदस्य भाग्यले बाँचे । विपन्न परिवारका अरूण ठिका-बिघा गरेर घर चलाउँदै आएका छन् ।
अरूणको घर जस्तै कुनै दिन ढल्नसक्ने अवस्थामा पुगेको एकाधिक घरहरू समष्टिमा अरू पनि देखिएको छ । अरूणको घर दुर्घटनाग्रस्त भएको सूचना पाएर गोजमुमो समष्टि सम्ति अध्यक्ष अञ्जुल चौहान तथा सचिव किशोर छेत्रीको अगुवाइमा निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । यस अवधी उनीहरूले पीड़ित परिवारलाई घर निर्माणको निम्ति विशेष पहल गर्ने आश्वासन दिए।
जीटीए बिओए विनय तामाङसित सम्पर्क गरेर अरूणको घर निर्माण गरिदिने साथै जीर्ण अवस्थाका अन्य घरहरूबारे पनि ठोस पाइला चाल्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । मोर्चा केन्द्रिय सहसचिव ज्योति कुमार राई, सदस्य बीबी राई, सीडी बान्तावा आदिले दु:ख व्यक्त गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । कोर कमिटी सदस्य दिनेश गुरूङले चामल ,खानेतेल लगायतका राहत सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराएका छन् । महकुमा समिति साङ्गठानिक सचिव प्रमोद शर्मा उक्त सामाग्री लिएर घटना स्थल आइपुगेका थिए ।
यता पञ्चायत विभागबाट घटना स्थलको निरीक्षण गरियो । बिभागबाट प्रदान गरिने तारपोलिन र अन्य राहत सामाग्री प्रदान गरिएको जानकारी पाइएको छ । गुरुङ बोर्डकोभने कतै चालचुल देखिएन।
सिलगढी, 21 जनवरी चर्चित भारतीय बाल कविता पर्फमर रिया...
‘जन्मिँदा आमाले जुन माटोमा झारे, कमसेकम लाश त्यही माटोले पुरियोस्’
‘तपाईं जन्मिँदा तीनकिलोको हुनुहुन्थ्यो होला। तर जुन ओजन भएर...